Iyo yekugovera uye yekuda pateni inotsigirwa zvakanaka, uye ipfupi-temu aruminiyamu mutengo kusagadzikana kwakasimba
Yakawanda yakawanda kabhoni dhayokisaidhi inogadzirwa panguva yekugadzirwa kweelectrolytic aluminium. Izvi hazvienderane nemweya we "kabhoni kusarerekera" uye "kabhoni kuwedzera" kwakakurudzirwa nevatungamiriri veChinese gore rapfuura. Mune ramangwana apo kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kuri kuwedzera kukosheswa, kufambira mberi kweelectrolytic aluminium yekugadzira kugona kuchakanganiswa. Panguva imwecheteyo, indasitiri yesimba nyowani iri kugamuchira kutariswa nekuwedzera nekuda kwekuchengetedzwa kwayo kwezvakatipoteredza. Iyo yekudzika yekuda kwealuminium yakawedzera. Iyo yazvino yakaderera hesheni inoratidza zvakare kuti kugovera uye kudiwa maitiro emusika wealuminium yakanaka. Iko kushomeka kwenguva pfupi kwemitengo yealuminium kunotarisirwa kuve kwakasimba, uye zvinokurudzirwa kutarisisa kutarisisa Mitemo inoenderana inogamuchirwa nehutungamiriri kuve nechokwadi chekupa nekudzikamisa mitengo.
Huwandu hukuru hwemagreenhouse gasi anoburitswa panguva yekugadzirwa kweelectrolytic aluminium, uye marongero anotadzisa kugadzirwa kwe electrolytic aluminium
Munyika yangu, yakawanda electrolytic aluminium inogadzirwa kuburikidza nemagetsi ekupisa. Simba remagetsi rinopisa rinowanzo gadzira magetsi nekupisa mafuta anopisa (854, -2.00, -0.23%), uye marasha anopisa anozogadzira yakawanda carbon dioxide panguva yekupisa, izvo zvinokuvadza nharaunda. Chikonzero kukuvadza. Parizvino, yangu nyika electrolytic aluminium yekugadzira kugona inowanzo kuve yakanyanya muShandong, Inner Mongolia, uye Xinjiang. Mutengo wemagetsi wakaderera muNorth West wakwezva yakawanda ye electrolytic aluminium yekugadzira kugona kuendesa kune yakapfuura. Zvisinei, pasi pesimba re "carbon neutrality" uye "carbon peaking", simba rakawanda rekushandisa maitiro ekudzivirira akaburitswa munzvimbo zhinji, senge Inner Mongolia, Ningxia, Guangdong, nezvimwewo, izvo zvinodzora kumhanya kwe electrolytic aluminium. kugadzirwa kugona. Munguva pfupi yapfuura, iyo "ziviso yekusimbisa manejimendi e" maPamusoro maviri "Mapurojekiti yakapihwa neGeneral Hofisi yeVanhu Hurumende yeShandong Province yakataura zvakajeka kuti mitsva" mitsva miviri "mitsva inofanirwa kuvakwa uye kudzikiswa kwesimba rekugadzira, kushandiswa kwemarasha , kushandiswa kwesimba, kuburitsa kabhoni, uye kusvibiswa kunoshatiswa kunofanirwa kuitwa zvine mutsindo. Imwe nzira. Dzimwe nzira dzekudzora dzinofanirwa kuongororwa, kuwanda, uye kuongororwa, zvikasadaro hadzizoshandisirwe senzira dzekutsiva. Panyaya yekudzora kugona chinzvimbo, iyo electrolytic aluminium chirongwa hachisi pasi pe1: 1.5. Panyaya yekudzikiswa kwesimba kwesimba, iyo yekutsiva reshiyo ye electrolytic aluminium haisi pasi pe1: 1.5. Nezve kabhoni kubviswa kudzikisira chinotsiva, electrolytic aluminium haisi pasi pe1: 1.5. Nzvimbo zhinji dzakatanga kusimbisa "mbiri kutonga", uye kugadzirwa kwemagetsi emagetsi ekugadzira magetsi kuchakanganiswa.
Kubva pakuona kwemutengo, mutengo wealumini uye mutengo wemagetsi ndiwo akanyanya kugadzirwa e electrolytic aluminium, uye zvese zviri zviviri mutengo zvinogona kuverengera ingangoita 35% yemutengo wekugadzira we electrolytic aluminium. Sekureva kwealumumina, sezvo kugadziridza-parutivi shanduko kusingabatanidze alumina, kuwedzera kwealumumina yekugadzira kugona haina kukanganiswa. Nekudaro, iwo wazvino mutengo we electrolytic aluminium wakakwira, uye kudiwa kwealumumina kubva ku electrolytic aluminium smelters ayo anogona kuburitsa ane simba. Naizvozvo, musika wealumumina parizvino uri mudanho rekuwandisa, uye mari yekutora alumina ishoma, saka alumina ichaenderera ichishanda padanho rakaderera munguva pfupi.
Kana iri marasha anopisa, kwete chete marasha anopisa anodikanwa kugadzira electrolytic aluminium, asi ikozvino nyika yapinda muzhizha, tembiricha yakakwira zvakanyanya, uye kudiwa kwemagetsi kwakawedzera, izvo zvakakurudzira mutengo wemarasha anopisa. kusimuka. Kubva muna Chikumi 24, iwo mutengo wepapo wemafuta anopisa aive 990 yuan. / Ton, padanho repamusoro mukati megore. Iyo yakasimba yemafuta emarasha mutengo ichawedzera mutengo wekugadzira we electrolytic aluminium, uye kune rutsigiro pasi pemutengo wealuminium.
Inventory inoramba ichiderera, kuderera kwerwizi kunogamuchirwa
Iko kushandiswa kwe electrolytic aluminium kunonyanya kuiswa mumaindasitiri senge zvivakwa, mota nemidziyo yemumba. Kubva pane iyo data poo yekuona, mashandiro eiyo real estate data sheet yakaramba ichivandudza, uye gore-ne-gore kuwedzera mukugadzirwa kwemotokari uye data rekutengesa raive richiri rakakura. Midziyo yemumba yakachengetedza yakanaka gore-ne-gore kukura mwero maererano nezve kugadzirwa, kutengesa uye kutumira kunze. Izvo zvinogona kuoneka kuti gore-ne-gore kukura kwehuwandu hweakakodzera dhata yeiyo aluminium terminal indasitiri yaramba. Izvi zvinoratidza kuti maindasitiri aya ari kubvisa zvishoma nezvishoma hwaro hwakakonzerwa nedenda munguva imwecheteyo gore rapfuura, asi vari kudzoka zvishoma nezvishoma pagore rekukura gore-ne-gore. Izvo zvinotora imwe nhambo yenguva. Naizvozvo, munguva pfupi, zvinotarisirwa kuti iyo yekupedzisira kushandiswa kwealuminium ichaenderera kuve yakanaka.
Aya maindasitiri ari pamusoro ndeese echinyakare zvinodiwa zvealuminium. Gore rino, sekuziva kwevanhu nezve kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma, indasitiri yesimba nyowani yakatarisirwa zvakanyanya. Maindasitiri akadai semagetsi matsva emagetsi, photovoltaics, uye simba remhepo zviri kuwedzera. Magetsi matsva emagetsi anoteedzera kurema kurema, saka miviri yavo inowanzo kugadzirwa nealuminium. Iyo furemu yemaseru e photovoltaic inogadzirwa nealuminium alloy. Aluminium inoshandiswawo munzvimbo zhinji dzemagetsi dzinogadzira electrophoresis. Pane iyo yese, iyo "kaboni isina kwayakarerekera" mutemo haingodzivise maitiro ekuisa electrolytic aluminium yekugadzira kugona, asi zvakare inowedzeredza yekudzika yekushandisa mapoinzi e electrolytic aluminium.
Panyaya yehuwandu hwevanhu, kubva muna Chikumi 24, zvinoenderana nehuwandu, huwandu hwemagariro e electrolytic aluminium munzvimbo shanu aive 874,000 matani, kuderera kwematani zviuru gumi nezvitanhatu kubva svondo rapfuura. Inventory munguva imwecheteyo gore rapfuura yaive mazana manomwe nemakumi maviri nemaviri ematani. Iyo yazvino hesera iri padanho repasi rechitatu munguva imwechete yemakore mashanu. Iyo yakaderera mwero yenguva yemberi zvinyorwa zvakare inoratidza izvozvi zvakanaka mamiriro ezvinhu ealuminium kupa uye kudiwa.
Aluminium mitengo inoramba yakasimba. Pamusoro pezvemukati mayo zvinokanganisa, zvakare ine humwe hukama nehumwe hwakakwana hwemhiri kwemakungwa. Yakabatwa nedenda, United States yakaburitsa nhevedzano yemitemo yekusimudzira hupfumi kubva mukota yekutanga yegore rino. Kubata kwepasi rose kwakakwana. Icho chigadzirwa chine mutengo wepasirese. Naizvozvo, nekusununguka kwemari, aruminiyamu mitengo inozowedzerwazve. Zvisinei, kuenderera mberi nekusimbiswa kwemitengo yezvinhu muhafu yekutanga yegore rino kwawedzera zvakanyanya mitengo yekugadzirwa kwemabhizimusi madiki nepakati, uye purofiti yavo yakadzikiswa. Aya mamiriro akakwezva kutarisirwa kwevakuru vevatariri. Kutanga kubva muna Chivabvu 12, vakuru vevatariri vakagara vachitaura nezve kudiwa kwekuchengetedza mitengo nemitengo yakatsiga, uye zvigadzirwa zvakawanda zvakawanzwa.
Mukupfupisa, "kabhoni kusarerekera" uye "kabhoni inokwira" haina kungodzivirira kuburitswa kwemagetsi ekugadzira emagetsi, asi zvakare kwakabereka kudiwa kutsva kwe electrolytic aluminium. Parizvino, kuwanda kweelectrolytic aluminium kuchiri kwakaderera uye izvo zvakakosha zvinogamuchirwa. Aluminium mitengo inotarisirwa Iyo pfupi-yenguva kusagadzikana yakasimba, uye isu tiri kunetsekana kuti 19200 mutsetse unogona kutyorwa zvakare. Zvinokurudzirwa kuti makambani akakodzera aite basa rakanaka mukutarisira njodzi, uye panguva imwecheteyo, zvinokurudzirwa kuti utarise kune akakodzera marongedzero akagamuchirwa nevakuru vezvemutemo kuti vaone kupa uye kudzikamisa mitengo.
Post nguva: Jun-25-2021